Wilderness Retreatw/ATV trail,Iphuli,imidlalo,izinsiza
Jabulela ichibi! Letha ama-ATV akho, izithuthuthu, amabhayisikili asezintabeni; i-trail ku-land, i-hockey yomoya, i-lasertag&imidlalo.Ukuphonswa kwesisindo, isitulo sokubhucunga(amandla adonsela phansi ayiziro&ashisayo)imibhede ye-Pillowtop. DESTIN Amabhishi;amanzi acwebile acwebile aqhele ngamamayela angama-40. Amahektare angama-3 anezinkuni ukuze ahlolwe. Eduze nokudoba, ukuzingela, i-snorkeling, i-zipline. Ukupaka izikebhe, ama-trailer.Amapaki esifunda w/amahhashi, kayaking&springs eduze. Ikhaya elingabhemi kodwa NGIYAKWAMA egcekeni kude nasekhaya. Izilwane ezifuywayo ezingaphakathi endlini kuphela kunkampani yazo yenethiwekhi noma ezigijima ngaphandle kwezinja.
Zicabange ungena endlini encane eklanywe uRalph Lauren. Ifenisha enhle, imibhede emikhulu, engaphezulu komcamelo enemicamelo eyengeziwe, izinto zokuphonswa ezinesisindo, isicoci somoya ekamelweni esihluza umoya ekhaya kanye nezibani ezi-2 zikasawoti. Izincwadi eziningi ongazifunda, ama-DVD ongawabuka nama-CD azodlalwa kanye namasethi e-poker, ithegi ye-laser yabantu abangu-4 kanye nomdlalo we-Walking Dead Trivia neminye. Jabulela i-pool kanye nokuzijabulisa okunganqamuki nokuhlala lapho ungalokothi ukhiphe ikhadi lesikweletu futhi lonke iqembu liyajabuliswa. 3 ama-TV esikrini esikhulu, izihlalo zemidlalo ezi-2, amachords e-USB. Xhuma i-firestick yakho, izinto zokudlala, i-NetFlix & Nemisakazo kuwo wonke amagumbi, izibani zikasawoti ezingu-2, okokuhlanza umoya, isethi ye-poker ephelele kanye nethrekhi ye-ATV / Cycle. Ngakho-ke letha amathoyizi akho anemoto namabhayisikili asezintabeni. Indawo yokupaka isikebhe, i-jet skis nezimoto eziningi. Izihlalo ezi-6 ezithokomele, ezigoqiwe, ezigoqayo ze-gazebo yesikrini ngaphandle kwama-hammocks angu-5 anama-quilt (angaphakathi eduze kwe-jacuzzi) kanye nomgodi womlilo kanye nokujabulela ngaphandle. Khanyisa amathoshi e-tiki futhi ujabulele imisindo yakusihlwa yemvelo. Amathawula angu-12 athambile kanye namathawula olwandle e-jucuzzi yasendlini. Ikhishi lisesimweni sobuciko futhi linamabhodwe anele, amapani nezinto zokwenza ukudla kwezifundo ezingu-7. Kunikezwe ukudla kwasekuseni namakhekhe kanye nembiza yamanzi ye-Brita. Izinkukhu, onogwaja, izingwejeje, izimvemvane, amaturkey nezinyoni ezimibalabala zizulazula emagcekeni. Ukuhlala izinsuku ezingaphezu kwezi-5 Baphe ukudla OKWENGATHIWA NGAMIDINI ngendlela ofisa ngayo. Ithangi le-Septic ngakho-ke AKUKHO IMIKHIQIZO YABESIFAZANE, AMATHWELETE NOMA EZINYE IZINTO EZINGACOSHWA; IPHEPHA LETOILET KUPHELA.
Wonke amakhaya asezindaweni ezinkulu zamahektha ama-4 noma ngaphezulu. Omakhelwane baqhele ngehektare elingu-1 nhlangothi zombili nangemuva yimpahla yombuso kanti ngaphambili kunomgwaqo omkhulu kanti omakhelwane ngaphambili nabo bakude. Uthango luhlukanisa zonke izakhiwo ngakho kungabikho iphutha uma usuhambe kakhulu. Kuhle ukuthi ufinyelele umakhelwane kalula kodwa ayikho inkinga ngomsindo noma ukuba seduze.
Ngihlala ngitholakala ngombhalo noma ucingo. Noma yini ongase uyidinge. Angivamile ukuba sekhaya. Ngiyabhaka ngipheke ngihlale ngishiya ukudla okulula. Futhi ukudla kwasekuseni njengamaqanda ansundu, ubhekeni, okusanhlamvu, ikhofi elimnandi, izikhwama zetiye ezikhethekile, ubisi, iyogathi, izithelo ezintsha nesinkwa esinojeli esiqandisini.
Ngihlala ngitholakala ngombhalo noma ucingo. Noma yini ongase uyidinge. Angivamile ukuba sekhaya. Ngiyabhaka ngipheke ngihlale ngishiya ukudla okulula. Futhi ukudla kwasekuseni nje…